Iibso Dhiirrigelinta & Calool-istaagga Dabiiciga ah Detox Dabiiciga ah Laso Slimming Shaaha - Raridda bilaashka ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Waxyaabaha ay ka kooban: Caleen Lotus, Xabxabka Jiilaalka, Abuurka Cassia, Hawthorn, Rose Double cas, Leaf Dandelion, Caleen Nettle, Lemon Caws, Shaah cagaaran.
Alaabtani waxay caawisaa jidhka iyadoo ku dallaca dheef-shiid kiimikaadka- kor u qaada dheefshiidka saxda ah, iyo caawinta hagaajinta habka dheef-shiidka.
Maaddooyinkan alaabada ah waxaa loogu talagalay inay kiciyaan awoodda jidhka si uu uga shaqeeyo dufanka xad-dhaafka ah, kicinta wareegga dhiigga, iyo bixinta antioxidants, fiitamiinnada, iyo macdanta muhiimka ah.
Nadiifinta sunta iyo xoojinta dheef-shiid kiimikaadka- 14-maalmood sun-saarista waxay jidhkaaga ka caawisaa inuu nadiifiyo oo iska nadiifiyo sunta iyo qashinka; waxay kordhisaa dheef-shiid kiimikaadkaaga iyo heerka tamartaada, waxay kaa caawisaa inaad ka takhalusto biyaha xad dhaafka ah, waxayna yaraynaysaa diiqada iyadoo weli aad u dhadhaminaysa.
Habka ugu wanagsan ee lagu nadiifin karo- Isku darka aan sameyno waxaa ka mid ah caleenta Senna ee caloosha jilcisa.
Alaabtani waa sun-saar khafiif ah oo taageerta bakteeriyada togan ee mindhicirka; ka caawinta jidhka si uu u helo hab-socodka dheef-shiid kiimikaadka oo si hufan u socda.
Markaad hesho alaabtan, waa inaad xaqiijisaa taariikhda wax soo saarka. Alaabtu waxay leedahay nolol shelf ah 2 sano.
Wakhtiga imaatinka heer sare ah taariikhda ka hor. Aad u faraxsan
Gaadhida degdega ah, si fiican loo baakadeeyay, waafaqi sharraxaadda. Aniga si aan inta hadhay sameeyo oo aan tijaabiyo;)
Aad u fiican shaahan oo ka saaraya dhammaan dufanka jidhka